फुटसलको बढ्दो मोहले खेलाडीलाई अब्बल बनाउनेछ : गुप्ता (भिडीयो सहित) - Pabil News
फुटसलको बढ्दो मोहले खेलाडीलाई अब्बल बनाउनेछ : गुप्ता (भिडीयो सहित)
| Categorized As अडियो/भिडियो, कुराकानी, खेलकुद, देश /समाज | With0Comments | 1145 Views
फुटसल फूर्सद कटाउन मात्र होइन शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न पनि मद्धत गर्छ । पछिल्लो समय युवा माझ लोकप्रिय बन्दै गरेको फूटसल विभिन्न जिल्लाजिल्लामा पनि खेल्ने गरिन्छ । धादिङ जिल्लामा पनि फूटसलको क्रेज बढेको छ । फुटसलको बढ्दो मोहले नै खेल क्षेत्रको विकासमा धादिङ जिल्लालाई अब्बल बनाएको छ । यो खेल खेल्नेहरू दिनानुदिन बढ्दैछन् । फूटसलको मागले नै धादिङमा पहिलो पटक धादिङ फुटसल एकेडेमीले फुटसल भित्राएका छन्् । दैनिक रुपमा एकेडेमीमा गएर फूटसल खेल्नेहरु धेरै छन् । सानो क्षेत्रफलमा यो खेल खेल्न सकिने हुनाले यसको लोकप्रियता झन्झन् बढ्दै गएको हो । थोरै समयमा पनि धेरै मज्जा लुट्न सकिने हुनाले फुटसलको क्रेज बढेको छ । यसै विषयमा धादिङ फूटसल एकेडेमीका म्यानेजर विर्जेस गुप्तासंग पाविल पाविलन्यूज डटकमका संवाददाता सृजना लम्सालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
फुटसल भनेको के हो ?
फुटसल भनेको फुटबलको नै एउटा ब्रान्ड हो । फुटबलवाट नै फुटसल आएको हो । पहिला फुटबल थियो ९ ए साईड ११ ए साईड भनिन्थ्यो त्यसलाई नै मिनी ईन्डोर गेम भनेर चिनिन्छ त्यसलाई नै फुटसल भनिन्छ ।
फुटसल खेल्ने र खेल्ने मैदानको बारेमा थोरै बताईदिनुस् न ?
लम्वाई ४० मिटर र चौडाई २० मिटर भएको एउटा कोट हुन्छ त्यसलाई चारै तिरबाट छेकेर बनाईएको हुन्छ ।
के फुटबल र फुटसल उस्तै हुन् ?
उस्तै होईनन् फुटबल र फुटसलमा के अन्तर छ भने फुटबल ९ ए साईड र ११ ए साईडमा ४५ मिटर ९० मिटरको डिस्टेन्स हुन्छ भने फुटसलमा चौडाई २० मिटर लम्बाई ४० मिटरको कोट हुन्छ । फुटबलको सानो रुप नै फुटसल हो ।
अहिले युवामाझ फुटसलको क्रेज वढ्दो छ, धादिङमा कसरी भित्रियो फुटसल ?
म सानैदेखि नै खेलाडी हुँ । मलाई हरेक खेलहरुमा रुचि लाग्छ । खेल्ने ठाउँ नहुदाँ घरको आगन, खुल्ला ठाउँहरुमा साथीभाई भेटेर खेल्ने गथ्यौँ । पछि हामी साथीहरु मिलेर फुटसल एकेडेमी संचालन गर्ने सोच आयो । धादिङमा सुरु भएको पहिले त फुटबलवाट नै हो । पहिले जुन गेम खेलिन्थ्यो अब त्यसलाई अझ स्तरउन्नती गर्नुपर्छ खेलाडीवर्गहरुमा पनि उत्साहजनक हुनुपर्छ अहिले जिल्ला स्तरीय जुन खेल्दैछ उनीहरुलाई पनि नेशनल लेभल सम्म लैजानु पर्छ भनेर यो सोचको साथ फुटसल स्थापना गरेको हो ।
फुटसल बिकासको लागि कस्ता सरकारी प्रयास भएका छन् ?
सरकारी प्रयासहरुमा राम्रै छ, धादिङ जिल्लाबाट अब यो हाम्रो खेलकुद विकास समितिवाट नगरपालिकावाट साथ पाईरहेका छौ हाम्रो खेलाडी वर्गमा हुनुपर्ने जुन सपोर्ट छ त्यो राम्रो पाएका छौ ।
फुटसल एकेडेमी संचालनमा ल्याउनुभएको छ, धादिङमा फुटसलको अवस्था कस्तो छ ?
फुटसलको अवस्था राम्रै छ, हामीले फुटसल एकेडेमी संचालनमा ल्याएको एक वर्षपनि पुगेको छैन । तर फुटसलमा सानासाना बालबालिकादेखि युवाबर्गहरुको क्रेज बढ्दो छ । उहाँहरु आउनुहुन्छ आनन्द लिनुहुन्छ खेल्नुहुन्छ यसैमा हामीलाई सन्तुष्टि छ ।
एकेडेमीमा कुन उमेर समुहका मानिसहरु बढि आउने गर्छ ?
यसमा कुनै उमेर तोकिदैन यसमा सबै उमेरका व्यक्तिहरु आउने गर्दछन् , जस्तै भाईहरु ५ देखि ७ बर्ष , ७ देखि १२ बर्ष , २२ देखी ४० बर्षसम्मका दाईहरु, आउने गर्दछन् यसमा कुनै उमेरले फरक पार्दैन जो सुकैले खेल्न सक्छन् ।
फुटसल खेल्दा हामीले के कस्ता फाईदा लिन सक्छौ ?
शारिरीक र मानसिक रुपमा स्वस्थ र तन्तुरुस्त रहन यसले मद्धत गर्छ । फुटसल खेल्दा शरिरका सबै अँगहरु स्वस्थ्य रहन्छ ।
एकेडेमी संचालन गर्नुभएको छ, कतिपयले त खेलप्रति नकारात्मक धारणा पनि राख्नुहुन्छ , उहाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
मानिसको आफ्नो आफ्नो ईच्छा चाहनाहरु हुन्छ, कोहि त्रिकेट, कोही फुटबल प्रति चाहना हुन्छ । कोहिले व्यक्तिगत दुश्मनीले पनि केहि भनिरहेका हुन्छन् त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्पुर्ण खेलप्रेमी साथीहरु आईदिनुहुन्छ यसमा नै खुसी लाग्छ ।
यस्ता चुनौतीहरुलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
हरेक क्षेत्रमा चुनौतीका पहाडहरु देखिन्छन् । त्यस्ता चुनौतीलाई हामीलिे बिस्तारै सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीलाई खासै त्यस्तो चुनौतीहरु आईपरको छैन, आईपरेको खण्डमा त्यतिखेर नै कसरी समाधान गर्न सकिने बाटो खोज्ने छौ ।
अन्त्यमा फुटसल खेल्ने पारखीहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
एकेडेमीका संस्थापक गोपीकृष्ण भण्डारी उहाँ पनि पहिले पुर्व धादिङ समाज धादिङका कप्तान हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँबाट पनि सिक्दै आएका कुराहरु जुन ग्राउन्डमा गएर खेल्नुपथ्र्याे । ढुङ्गा र रोडाहरु हुन्थ्यो बल खेल्यो १५ मिनेट तल खोलामा गएर लेराउनुपथ्यो । त्यस्तो समस्यालाई पार गर्दै आज हामी फुटसल स्थापना गर्न सफल भएका छौ । म के भन्न चाहान्छु भने धादिङ जिल्ला मात्र नभएर नेपाल अधिराज्यमा हामी जिल्लावासी छौ जिल्लाकै लेभलमा खेल्नुपर्छ भन्ने छैन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि खेल्नुपर्छ त्यसैले फुटसल आउनुस खेल्नुस र खेल क्षेत्रमा आफुलाई अब्बल हुनुस् भन्न चाहान्छु ।